Maradona: Jecliyaa Inaan La Shaqeeyo Guardiola
HomeWararka MaantaMaradona: Jecliyaa Inaan La Shaqeeyo Guardiola
Diego Maradona ayaa sheegay inuu aad u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo tababaraha kooxda Bayern Munich ee Pep Guardiola oo uu todobaad kaliyana ha noqotee la joogo garoonka Allianz Arena.
Kooxda Germalka ah ayaa ku guulaysatay horyaalka wadanka Germany, kadib markii ay habeen hore ku garaaceen naadiga Hertha Berlin 3-1, walina haya jidkii guulaha badan ee sanadkii hore oo kale.
Arintaas ayaa soo jiidatay halyeygii hore ee qaranka Argentina, Diego Armando Maradona oo si weyn ula dhacay shaqada macalin Pep oo si lamid ah sidii uu u dhisay kooxda Barcelona , koox aan loo jilib dhigi karin ka dhigay Bayern Munich mudadii gaabnayd ee uu la joogay.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo Guardiola oo ku booqdo Bayern, shaqadiisa uun aan daawado. Taas aad baan u jeclaan lahaa,” ayuu 53 jirkan mucjisada kubada cagta loo aqoon san yahay ku yidhi jariidada Germalka ka soo baxda ee Sport Bild.
“Xulka Germany Waligiiba wuxuu ku jiray xulalka ugu awooda badan, ee la sii saadaaliyo inay koobka aduunka ku guulaysanayaan, taasi isma bedelin. Laakiin arin taas ka duwan ayaa imika jirta: Beryahan waxaad ku arkaysaa ciyaaro waaweyn oo ka dhacaya gudaha Germany.
“Halkaas weeye meesha kubada cagtu horumarka la taaban karo ka samaysay. Xiisaha ayaa sii siyaadaya waanay ka gudbeen xiligii difaaca adag iyo kubadaha dhaadheer ee la isu tuurayo ku. Kubada cagta Germalku imika waa mid aad u xalad badan.”